VPN karama vs VPN maimaim-poana: Maninona no misafidy VPN karamaina? | Avy amin'ny Linux
Isaac | | Featured, Tambajotra / seriver
Raha mieritreritra hampiasa a Serivisy VPNAzo antoka fa efa fantatrao fa misy serivisy maimaim-poana tanteraka ary ny hafa kosa aloa. Ny mpampiasa sasany dia mitady fampitahana VPN VPN maimaim-poana, ary mino fa manome azy ireo izay rehetra ilainy izy ireo mba hialana amin'ny fandoavana denaria iray.
Fa ny marina dia tsy iray amin'ireo safidy tsara indrindra izy io. Raha te hahalala ny antony ianao dia hasehoko amin'ity toro-lalana ity ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny VPN, mba hahafahanao misafidy ny tsara indrindra amin'ny filanao fa tsy ho voafitaka ...
1 Inona ny atao hoe VPN?
2 Endri-javatra tokony hojerenao rehefa mifidy serivisy VPN
3 Fampiharana VPN
3.2 Tsiambaratelo sy tsiambaratelo
3.3 Midira serivisy voafetra
4 VPN maimaim-poana vs voaloa
5 NordVPN: serivisy mora vidy sy matihanina
5.2 Ny vidiny sy ny fomba fandoavam-bola
5.4 Mora ampiasaina
Inona ny atao hoe VPN?
Raha manontany tena ianao inona ny VPN (Tambajotra tsy miankina virtoaly), na tambajotra tsy miankina virtoaly amin'ny Espaniôla dia tokony ho fantatrao fa serivisy ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra soa aman-tsara izany satria manitatra ny tambajotra LAN (tambajotram-paritra eo an-toerana) amin'ny tambajotram-bahoaka toy ny Internet. Miteraha fantsona azo antoka ho an'ny famindrana toy ny hoe ao anaty tambajotra tsy miankina ianao.
VPN dia manome tombony maro, toy ny miafina amin'ny niandohan'ny fivezivezena tambajotra sy ny IP anao. Hanome anao IP IP hafa ny mpamatsy VPN ary mety an'ny firenena hafa ankoatry ny anao izy. Io dia ahafahana miditra amin'ny serivisy voafetra ao amin'ny faritra misy anao, izay manome tombony lehibe hialana amin'ireo fetra ireo.
Ny VPN dia afaka manafina ny fivezivezena tambajotra ihany koa. Raha tokony handefasana angon-drakitra amin'ny lahatsoratra tsotra eo anelanelan'ny mpandefa sy ny mpandray izy, dia voahidy. Izany dia tsy ahafahan'ny olon-kafa mitsikilo ny fifamoivoizana hiditra amin'ny fampahalalana izay mamela ny anarana miafina sy ny tsiambaratelo bebe kokoa amin'ny fitetezana anao. Izany hoe, mandray anjara tsiambaratelo momba ny angon-drakitra, iray amin'ireo andry fototra amin'ny fiarovana ny solosaina ary izay manandanja indrindra amin'ny orinasa na amin'ny fifandraisan-davitra.
Mandray anjara koa izany fahamendrehana data. Izany hoe, miantoka fa mahatratra ny mpandray azy tsara sy feno ny angona amin'ny alàlan'ny famoronana fantsona azo antoka. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia manakana azy ireo tsy ho voasambotra eny an-dàlana ho fanovana na fanodinkodinana. Antony iray fiarovana lehibe hafa.
Mety hieritreritra ianao fa ho an'ny mpampiasa trano dia sarotra ny mampihatra azy, saingy diso ianao. Manolotra fampiharana ny serivisy VPN amin'izao fotoana izao tena tsotra hanamboarana sy handefasana, na dia tsy manana fahalalana ara-teknika aza ianao.
Hevi-diso iray hafa momba ny VPN ny serivisy izay manao izany rehetra izany, indrindra ho an'ny orinasa, dia tsy maintsy lafo be. Fa ny mifanohitra amin'izay ihany koa, VPN mivoaka tena mora ary manome tombony izay azo tratrarina ihany koa amin'ny fomba lafo kokoa hafa. Noho izany, hamonjy vola amin'ny haitao hafa lafo vidy kokoa izy io.
Ka aiza ny olana? Ny marina dia izay fatiantoka VPN nidina tamin'ny iray izy ireo tamin'ny ankapobeny: hafainganam-pandehan'ny fifandraisana. Saingy soa ihany fa ny serivisy VPN anio, indrindra ireo karama, dia manana teknolojia hiantohana fa avo dia avo ny fampisehoana. Noho izany, ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisanao dia tsy miadana ary tsy ho hitanao izany. Fehiny, tombony maro ary tsy misy fahalemena ...
Endri-javatra tokony hojerenao rehefa mifidy serivisy VPN
Rehefa misafidy VPN ianao dia misy maromaro endri-javatra manan-danja. Izy ireo no teboka manome lanja ny serivisy an'ity karazana ity. Raha te hahalala fomba hisafidianana VPN tsara dia tokony hikarakara ireto pitsopitsony manaraka ireto ianao:
Fahafahana misafidy IP: ny serivisy VPN sasany dia mamela anao hisafidy ny mpizara hifandraisanao amin'ilay serivisy, manana mpizara samihafa any amin'ny firenena manerantany. Io dia ahafahanao misafidy ny niavian'ny IP nomena anao. Amin'izany no ahafahanao mifandray amin'ny VPN miaraka amin'ny IP avy amin'ny firenena izay fantatrao fa mandeha tsara ny serivisy misy ferana ho an'ny faritra jeografika misy anao.
Algorithme enkripsi- Ny fifamoivoizana amin'ny tambajotra Encrypting dia mampiasa lakilen'ny encryption ary fomba iray hanovana ny angona lahatsoratra tsotra ho zavatra tsy takatry ny saina mihitsy. Miankina amin'izany ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny VPN voafantina, satria arakaraka ny maha-matanjaka sy azo antoka ny algorithm, no tsy dia kely ny fahafahanao mamaky ny fifamoivoizana.
hafainganam-pandeha- Miankina amin'ny encryption ihany koa io anton-javatra io, satria ny data izay ampitaina dia tsy maintsy atao encryptage sy decrypted ary io no tena mampiadana ny fifandraisana. Ny VPN maimaim-poana dia mazàna manana hafainganam-pandeha mahantra kokoa noho ny karama, ankoatry ny famerana ny fivezivezena.
Tsiambaratelo sy tsiambaratelo: ny VPN sasany mitazona hazo miaraka amina data marobe avy amin'ny mpanjifa nanakarama ny serivisy, ny sasany zara raha mitazona hazo, manome anarana hafa. Tokony hisafidy ireo izay mitahiry faran'izay kely araka izay azo atao momba anao ianao.
Soporte: ny serivisy maimaimpoana dia tena voafetra amin'ity lafiny ity, fa kosa ny serivisy mandray karama mazàna dia manolotra fampiharana mpanjifa ho an'ny sehatra na rafitra fandidiana marobe. Ohatra, ho an'ny Android, Windows, iOS, macOS, Linux, ary na dia ny fahita lavitra amin'ny fahitalavitra, ny router ary ny fanitarana finday.
ny fiasa izany- Fampiharana mpanjifa maro azo avy amin'ny serivisy VPN no tena mora ampiasaina. Mila tsy misy fikirakirana izy ireo ary mamela ny fifandraisana amin'ny tsindry bokotra. Na dia tsy manana fahaizana amin'ny solosaina aza ianao dia afaka mampiasa azy ireo tsy misy olana.
Fomba fandoavana: Ny serivisy maimaimpoana dia tsy manana an'io karazana olana io, toy ny amin'ny serivisy aloa, azonao atao ny misafidy amin'ny fomba samy hafa. Manomboka amin'ny fandoavam-bola avy amin'ireo magazay fampiharana amin'ny sehatra finday, mankany amin'ny fomba hafa toy ny carte de crédit, PayPal, ary na dia miaraka amin'ny crypto hafa toa Bitcoin aza mamela ny mombamomba anao.
Ny fangatahan'ny DMCA: ny lalàna miaro ny zon'ny mpamorona any Etazonia dia manana fifanarahana amin'ireo firenena samy hafa hanomezana data momba ireo mpampiasa izay nanao fandikan-dalàna toy ny famokarana sy fizarana fitaovana arovana (piraty rindrambaiko, boky, mozika, sarimihetsika, ...). Saingy misy ny firenena sasany izay manao toy ny fialofana ara-dalàna ary tsy mitatitra izany angona izany, izay miaro anao bebe kokoa raha toa ka nampiasa ny VPN tamin'ny fampiasana hosoka ianao.
Asistencia- Ny fanohanana ara-teknika ny serivisy VPN maimaimpoana dia tena mahantra na tsy eo amin'ny tranga sasany. Etsy ankilany, ny serivisy fandoavambola dia manome serivisy amin'ny fiteny maro, na dia amin'ny teny anglisy fotsiny aza ny ankamaroan'ny tranga. Ho fanampin'izany, matetika izy ireo dia manampy anao amin'ny alàlan'ny chat mivantana, mailaka, na fomba fifandraisana hafa 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro.
Mety tsy mahita priori ianao antony hampiasa VPN, fa ny marina dia ireo orinasa roa ireo, na inona na inona ny habeny, ary koa ireo mpampiasa trano, dia manana antony matanjaka hampiasa serivisy VPN. Raha mila antony sasany ahazoana iray amin'ireto serivisy izao ianao dia ireto misy fanasongadinana ...
Andramo NordVPN iray amin'ireo VPN tsara indrindra eny an-tsena. Hizaha amin'ny fomba tsy mitonona anarana sy soa aman-tsara ianao.
SARS-CoV-2 dia mijanona eto, ary ny areti-mandringana Nahatonga ny zavatra maro hamerina izany. Anisan'izany ny fomba iasanao sy ianaranao. Nandritra ny nitazomana azy dia ivon-toerana fanabeazana maro no nanomboka nampianatra kilasy an-tserasera, ary misy orinasa sasany nanome ny mpiasan'izy ireo fahaizana telecommute.
Miaraka amin'ny ho avy tsy azo antoka noho ny fisalasalana raha hisy ny vaksininy, raha toa ka afaka mamokatra ara-potoana azy ireo (sy ho an'ny rehetra), ary raha mety hisy ny fiparitahan'ny aretina dia mety hanomboka handinika telefaona maro ny orinasa maro. toy ny endrika fandidiana maharitra.
Ho an'ireo tranga ireo, ny tsiambaratelo sy fiarovana ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo sy ny mpanjifa izay tantana dia ataovy ilaina ny mampiasa VPN. Raha tsy izany ianao dia ho mora tohina amin'ny fanafihana an-tserasera, fitsikilovana indostrialy sns.
Tsiambaratelo sy tsiambaratelo
La Zo ny fiainana manokana amin'ny Internet izay voahitsakitsaka tanteraka, na ny governemanta sasany, na ny sampam-pitsikilovany, izay mampiasa fitsikilovana goavambe ary koa orinasa lehibe manangona angon-drakitra fizahana na fampiasana ny fampiharana azy ireo ary avy eo mivarotra izany amin'ny antoko fahatelo na hamakafaka amin'ny alalàn'ny Big Data ho an'ny fampielezan-kevitrao.
El anarana Tena mahaliana ihany koa izany, ary miaraka amin'ny VPN, ampiarahana na dia misy serivisy hafa toa ny Tor, sns aza, afaka manome antoka ny fiainana manokana sy ny tsiambaratelo amin'ny fifandraisanao izy ireo.
Ary koa, tokony ho fantatrao fa ny ISP anao, mpamatsy serivisy amin'ny Internet, dia afaka mitahiry ny angona fifamoivoizana mandritra ny taona maro. Izany dia satria ny fifamoivoizana rehetra amin'ny tambajotrao dia mandalo amin'ireo mpizara azy. Ireo hetsika fitetezana rehetra ireo dia azo natolotra tamin'ny governemanta, orinasa mpanao dokam-barotra, orinasa sns. Amin'ny alàlan'ny VPN dia azonao atao ny manala an'io olana io.
Midira serivisy voafetra
Serivisy fandefasana horonantsary maro, fampiharana fampiharana fivarotana, ary serivisy hafa voafetra amin'ny faritra jeografika sasany. Ary koa, ny sehatra atiny sasany dia tsy manome zavatra mitovy amin'ny firenena iray hafa. Raha te-hanala ireo fetra ireo ianao indray mandeha, dia ny VPN no ilainao.
ny ejemploAlao an-tsaina hoe te hahita atiny amin'ny fantsom-pahitalavitra mandefa Internet amin'ny firenena hafa ianao, saingy ho an'ny firenena niaviany ihany izany fanompoana izany. Miaraka amin'ny VPN ianao dia afaka mahazo IP avy amin'io firenena io ary miditra aminy toy ny hoe manana IP "teratany" avy any ianao.
VPN maimaim-poana vs voaloa
Ny olana mahazo ny maro dia ny fampiasana ny iray karama na maimaim-poana. Ny marina, raha ny resaka filaminana no resahina, mazava tsara ny safidy. Ho fanampin'izany, ny serivisy maimaimpoana dia tsy vitan'ny hoe manome tolotra kely fotsiny ho an'ny fiarovana sy fampisehoana, fa manana fetrany henjana ihany koa amin'ny resaka fifamoivoizana isan'andro na isam-bolana.
ny ejemploNy sasany tsy hanaiky afa-tsy 500MB isam-bolana, izay ambany dia ambany ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Izany hoe mety ho azo ampiharina ihany izy ireo raha mitady hampiasa VPN amin'ny tranga vitsivitsy ianao, ary amin'ny fampiasana tsotra. Ohatra, amin'ny fandefasana horonantsary sy ny toy izany dia tsy ampy izany noho ny habetsaky ny angona voatazona amin'ireny tranga ireny, indrindra raha HD, FullHD na 4K.
Serivisy VPN maimaim-poana koa ferana ny isan'ny fitaovana mifandray miaraka. Matetika izy ireo dia mamela kaonty 1 isaky ny kaonty. Tsy azo eritreretina izany ho an'ny orinasa iray, ary ho an'ny trano iray izay misy ny solosaina, takelaka, finday, fahitalavitra marani-tsaina sns ...
Ary ny zava-drehetra dia raha tsy mandoa vidin'ny VPN ianao dia hiafara amin'ny fandoavana azy amin'ny fomba hafa, na amin'ny kivy amin'ny tsy fiasana araka ny antenainao, amin'ny fetran'ny mety handanjalanja ny asanao, amin'ny doka izay arosony, sns.
NordVPN: serivisy mora vidy sy matihanina
NordVPN dia iray amin'ireo serivisy atolotra indrindra avy izay hisafidianana. Manome ny tsara rehetra amin'ny serivisy misy karama izy io, saingy amin'ny vidiny mirary tokoa ka saika maneho ny fiatraikany zero amin'ny toekarenao. Ny drafitra sy ny fampiroboroboan'izy ireo dia tena mora, ary ny tahan'ny kalitao / ny vidiny dia tsy azo resena.
ny tombony noho ny mpifaninana hafa hita miharihary izany rehefa manamarina ny endriny ianao:
Orinasa miasa avy Panama.
Fitrandrahana data kely indrindra ho an'ny anarana hafa.
Mpizara mihoatra ny 5000 ao Firenena mihoatra ny 50 miaraka amin'ny IP isan-karazany.
fanohanana Netflix tsy misy olana, ary koa ny fisintomana P2P, torrent, ary serivisy streaming hafa toa an'i Amazon Prime, sns.
Ny encryption tena azo antoka noho ny algorithm AES-256.
protocols OpenVPN sy IKEv2 / IPSec.
Email na fanohanana mivantana amin'ny chat 24 / 7.
Ary inona no adika amin'ity lisitr'ireo endri-javatra rehetra ity? Andao hofaritana tsikelikely izany ...
Amin'ny fananana a log data kely indrindra avy amin'ny mpanjifa, tsy hanana angona be loatra avy aminao izy ireo. Manome anarana tsy fantatra anarana bebe kokoa izany, ary ny mailaka nosoratanao sy ny fandoavam-bola ihany no voarakitra. Saingy tsy hanoratra data hafa fanampiny momba anao na ny hetsika ataonao amin'ny fifandraisana VPN izy io.
Ho orinasa miaraka amin'ny foibe any Panama, miasa eo ambanin'ny lalàn'ity fialofana ara-dalàna ity, ary ny lalàny dia tsy mieritreritra ny hanaiky ny fangatahan'ny DMCA. Teboka iray hafa manohana azy amin'ny fiarovana anao.
Tadidio fa na dia voahodina ho CloudVPN, orinasa voasoratra anarana any Etazonia aza ny fandoavambola, ity orinasa ity dia tsy manangona afa-tsy vola, fa ny orinasa ao aorinan'ny NordVPN dia mbola Teficom Co & SA izay miasa araka ny lalàna Panameana. Aza matahotra noho izany raha hitanao fa hita taratra amin'ny fandoavam-bola ...
Ny vidiny sy ny fomba fandoavam-bola
Para misoratra anarana amin'ny NordVPN afaka mampiasa maromaro ianao bola fomba, toy ny PayPal, carte de crédit, UnionPay, AliPay, Google Play, Amazon Pay, vola crypto sns. Ankoatr'izay, manana ny iray amin'ireo vidiny mifaninana indrindra ao amin'ity sehatra ity izy, noho izany dia tsy mila mampiasa vola be ianao vao manomboka mankafy ny VPN.
ny vidin'ny avy any NordVPN dia:
€ 3.11 / volana ho an'ny drafitra 2 sy 3 taona.
€ 6.22 / volana ho an'ny drafitra 1 taona.
€ 10.64 / volana raha te hanakarama azy mandritra ny iray volana fotsiny ianao.
Ary koa, tsy maintsy fantatrao fa manana fampiroboroboana sy fihenam-bidy mahaliana azonao ampiasaina izy io mba hitahiry bebe kokoa amin'ny famandrihanao amin'ny NordVPN. Ary raha tsy faly ianao, averin'izy ireo ny vola feno afaka 30 andro, porofom-piantohana iray fa azo antoka ny NordVPN mamoaka izay lazain'izy ireo ary tsy ho diso fanantenana ianao.
NordVPN dia mirehareha amin'ny iray amin'ireo hafainganam-pandeha haingana eran'izao tontolo izao, ary ny marina dia tsy manitatra. Amin'ity serivisy ity dia tsy hanana fetra ianao rehefa mihoatra ny fetra na olana amin'ny hafainganana, ho fanampin'izany, manome antoka izy fa afaka mifandray amin'ny fifandraisana 6 miaraka ianao mba hahafahanao mampiasa ny VPN miaraka amin'ny fitaovanao finday, fahitalavitra hendry, solosaina , sns.
Ity haingam-pandeha ity dia tratra noho ny fitaovana izay manakana ny mpampiasa hafa tsy hanararaotra sy hanimba ny fahombiazan'ny tambajotra, noho ny lohamilina maherin'ny 5000 50 mahery izay miparitaka manerana ny firenena maherin'ny XNUMX eran'izao tontolo izao, ary ny protokolon'ny NordLynx revolisionera.
Ny apps NordVPN dia mitaky fisie tsy misy mihitsy ary afaka manomboka mankafy ny fifandraisanao VPN ianao bokotra fotsiny. Tsotra be amin'ny Quick Connect ho an'ny fifandraisana haingana, ny fisafidianana ny mpizara tianao, sns.
Ary fotodrafitrasa fanampiny ho anao arovana amin'ny fotoana rehetra. Ny serivisy hafa, raha tsy mahomby izy ireo dia esory tsy misy fampandrenesana ary hampiharihary anao. Hieritreritra ianao fa mbola voahidy amin'ny fiarovana VPN ianao rehefa tsy izany. Fa kosa, NordVPN dia manana Kill Switch, izay raha tsy mahomby izy io, dia manapaka ny fifandraisana Internet ihany koa mba tsy hisy data azo ekena.
Ny fiarovana an'i NordVPN dia tsy avy fotsiny algorithm enkripsi ary Kill Switch. Ireo teknolojia sy protokolola hafa ampiasain'ity serivisy ity izay hasiako antsipiriany izao.
Raha ny algorithm, dia efa fantatrao fa mampiasa izany AES-256, algorithm matanjaka izay mampiasa teti-pandrefesana sakana izay mbola tsy voahitsakitsaka hatramin'izao. Fiarovana tena azo antoka hiarovana ny fifandraisanao, ary hatokisana tanteraka anao.
Ankoatr'io algorithm enkripsi io dia manana koa protokol azo antoka iankinan'ny NordVPN's VPN, toy ny OpenVPN sy IKEv2 / IPSec. Ary raha tsy ampy izany, NordVPN dia miaro amin'ny fivoahan'ny DNS ihany koa, manafina ireo fitaovana mifandraika ao anaty LAN, ary manao izay ahafahana mampiasa mpizara Onion amin'ny alàlan'ny VPN hampiasana Tor ho sosona fanampiny raha ilainao izany.
Miaraka amin'ny haitao CyberSec mamela anao hiaro ny tamba-jotra amin'ny fandrahonana malware sy dokam-barotra manelingelina anao io rehefa mizaha. Izany dia mitondra fiarovana fanampiny fanampiny nampiana an'ireo rehetra voalaza etsy ambony, manao NordVPN ho iray amin'ireo serivisy matanjaka indrindra. Afaka mahita ny horonan-tsary tadiavinao rehetra avy amin'ny YouTube aza ianao nefa tsy aseho dokam-barotra ...
Ny serivisy VPN misy karama sy maimaim-poana dia voamarika ary sakanan'ny sehatra sasany toa an'i Amazon Prime, Netflix, Hulu, sns. Amin'ny tranga NordVPN, tsy izany no izy, ary manana serivisy fanampiny natao manokana izy io mba hampandeha tsara ity atiny streaming ity raha tsy misy fanahafana fanampiny.
SmartPlay DNS Teknolojia izay manampy amin'ny fandresena ireo fameperana ara-jeografika ireo serivisy ireo, noho izany dia tsy mila manao na inona na inona ianao mba hankafizanao ireo andian-tsarimihetsika tianao. Vita mandeha ho azy sy mangarahara amin'ny mpampiasa ny zava-drehetra.
Ary raha manontany tena ianao Fampidinana P2P, amin'ny torrent, sns., tokony ho fantatrao koa fa manohana azy ireo i NordVPN.
NordVPN dia manana fampiharana ho an'ny isan-karazany rafitra sy sehatra fandidiana, toy ny finday Android sy iOS, na Linux, birao Windows sy macOS, ary koa ny fahita lavitra amin'ny fahitalavitra Android. Ary azonao atao koa ny mampiasa extensions na add-on ho an'ny mpizaha toa an'i Chrome sy Firefox.
NordVPN manolotra a Serivisy 24/7, mba hanatrehana foana anao hanontany ny fanontanianao na ny olanao amin'ny alàlan'ny mailaka, na amin'ny chat mivantana raha tianao. Mazava ho azy fa amin'ny teny Anglisy izy io, saingy afaka mampiasa mpandika teny ianao mba hanandramana mifandray tsy misy olana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » VPN karama vs VPN maimaim-poana: Maninona no misafidy VPN karamaina?
hadalana dia hoy izy:
Hadalana amin'ny harona, raha mila vpn tena izy ianao dia mandoa ary jereo. Expressvpn, dia iray amin'ireo lafo indrindra, raha tsy lafo indrindra, nefa vpn izany ary ny ambiny tsy misy dikany, rehefa azonao izany dia azonao ny vidin'ny vidiny ary amin'ny Linux dia mahagaga tokoa izany, ao amin'ny Windows I tsy haiko, satria tsy ampiasaiko ireo zavatra ireo, ny Linux fotsiny no ampiasaiko amin'ny solosaiko rehetra, tsy manana ny antic boot roa miaraka amin'ny Windows sy Linux aho, raha hiteny any aoriana, mpilalao Linux aho, TSY, mampiasa Windows ianao ary avy eo Linux, Linux no iray ihany no mampiasa Linux, satria Windows ankehitriny dia tsy ilaina mihitsy. Raha afaka aho dia hampiasa Expressvpn foana, na lafo aza izany, tsy miraharaha aho. Nanana an'i Nordvpn aho tamin'izany fotoana izany ary nangataka ny hamerenako ny vola satria tsy misy dikany izany, izany no antony maha-mora azy, mba hisarihana ny sarambabem-bahoaka ho an'ny vidiny fa tsy ny fahombiazany. Raha mila vpn tena izy ianao, expressvpn ary ballpoint.
Valio ny resaka omby
Manantena aho fa miasa ity Firefox VPN ...
Oscar Meza dia hoy izy:
Ny VPN dia rafitra iray be mpampiasa mba hidiran'ny mpiasa soa aman-tsara ny tambajotran'izy ireo, miaraka amin'ny Linux dia misy StrongSwan, OpenVPN, sns. Ireo dia rafitra OpenSource izay mifaninana amin'ny rafitra fandoavam-bola. Ny hany zavatra tokony hananan'ny orinasa dia IP ho an'ny daholobe sy fantsom-pifandraisana arakaraka ny fangatahan'ireo mpampiasa azy lavitra.
Ireo VPN OpenSource ireo dia azo ampiasaina hamoronana fantsona azo antoka eo amin'ny birao foibe sy ny rantsany.
Valiny tamin'i Oscar Meza
sifflet dia hoy izy:
Mampiasa NordVPN aho ary tsara amin'ny Linux. Tsy dia matoky VPN maimaimpoana aho. Androany tao amin'ny twitter dia namaky aho fa vao haingana be dia be ny VPN maimaim-poana nahazo famoahana data: https://www.vpnmentor.com/blog/report-free-vpns-leak/
Baidu dia miditra ao amin'ny Open Invention Network ary manome fidirana amin'ny patanty isan-karazany
Jona 2020: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software